एमालेको सुदूरपश्चिम संयोजक स्वतः म हुँ, कर्ण थापाले गुण्डागर्दी गरेः भीम रावल – Nepal Press
एमालेको सुदूरपश्चिम संयोजक स्वतः म हुँ, कर्ण थापाले गुण्डागर्दी गरेः भीम रावल
२०७७ फागुन २६ गते १९:१९
काठमाडौं । सत्तारूढ नेकपा (एमाले) का उपाध्यक्ष तथा सुदूरपश्चिम प्रदेशका संयोजक डा. भीम रावलले प्रदेश कार्यालयमा गरिएको तोडफोडलाई गुण्डागर्दी र अराजकताको संज्ञा दिएका छन् । कर्ण थापाको निर्देशनमा केही कार्यकर्ता गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भएको उनको दाबी छ ।
राजधानीमा आयोजित एक कार्यक्रममा रावलले घटनामा संलग्नलाई कारबाही नगरिए उक्त घटना सरकार संरक्षित थियो भन्ने पुष्टि हुने बताए । घटनाको बारेमा आफूले गृह प्रशासन र पार्टी नेतृत्व पंक्तिलाई पनि सूचित गराएको उनले जानकारी दिए ।
‘सरकारी पक्ष भनौं वा हामी बाहेकको अर्को गुटको पक्ष भनौं कि आज बिहान साढे ११ बजे, अकस्मात्, कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न गाउँबाट आफ्ना पक्षका मान्छेलाई बोलाएर, जबरजस्ती कार्यालयमा पसेर तोडफोड गर्ने काम भयो । हाम्रो भानुभक्त जोशीजीको कार्यालयमा ताला लगाइएको थियो । पाँचवटा कुर्सी भाँचेका छन्’, रावलले भने ।
उनले थपे, ‘बाजुराका कर्ण थापाको निर्देशनअनुसार केही कार्यकर्ता गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भए । बाजुराको अर्का व्यक्तिले पनि हाम्रा साथीलाई आक्रमण गरे । म यो घटनाको निन्दा गर्छु । आज गुण्डागर्दी कर्ण थापाबाट भएको हो । यो गतिविधिले नेकपा एमालेलाई पनि फुटाउने हो ।’
कर्ण थापाले स्वघोषित अध्यक्ष घोषणा गरेर गलत काम गरेको टिप्पणी रावलले गरे ।
उनले भने, ‘तर, आज त्यहाँ उनी गुण्डागर्दी शैलीमा प्रस्तुत भए । यसो नगर्नुहोस् भनिएको थियो । अदालतको फैसलाअनुसार मैले नै नेकपा एमालेको साइनबोर्ड राख्न निर्देशन दिएको थिएँ । सोहीअनुसार राखिएको थियो ।’
उनले यसरी नै गुण्डागर्दी, अराजकता, मनपरीतन्त्र गर्ने हो भने आफूहरुले पनि सशक्त प्रतिवाद गर्ने चेतावनी दिए । सबैले हिजोको नकारात्मक कुराबाट शिक्षा लिनुपर्ने पनि उनले बताए ।
‘अदालतको फैसला आएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र अलग–अलग भएको अवस्थामा लेखराज भट्टलाई इन्चार्ज बनाएर मेरो बोर्ड हटाउने हो त ?’ रावलले प्रश्न गर्दै भने, ‘कसैको साइनबोर्ड तोडेर आफ्नो मान हुन्छ त ? गृह प्रशासनलाई खबर गरेको छु । हाम्रो सुरक्षा हामी आफैं गर्छौं भनेको छु । हाम्रो पार्टीका महासचिवलाई पनि जानकारी गराएको छु । कम्युनिष्ट आन्दोलनलाई जोगाउने उद्देश्य छ भने यस्तो काम बन्द गर्नुपर्छ । एमालेलाई पनि चकनाचुर गर्छौं भन्ने हो भने बेग्लै कुरा। यसमा प्रधानमन्त्रीको पनि ध्यान जानुपर्छ ।’
उनले आफू सुदूरपश्चिम संयोजक भएको बताए ।
‘हिजो सुदूरपश्चिम प्रदेशको म नै संयोजक थिएँ । मलाई नेतृत्व गर्ने अधिकार दिइएको थियो । म स्वतः संयोजक हुँ । एमालेले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा मेरो नेतृत्वमा अभूतपूर्व सफलता हासिल गरेको हो ।’
प्रकाशित: २०७७ फागुन २६ गते १९:१९
One thought on “एमालेको सुदूरपश्चिम संयोजक स्वतः म हुँ, कर्ण थापाले गुण्डागर्दी गरेः भीम रावल”
अनि सुदुरपश्चिम पार्टी कमिटीको कोष बाट डकैती सैलिमा झिकेको ३० लाख पैसा भिम रावलले फिर्ता गर्नु पर्छ कि पर्दैन ??